Apple dia mety hamoaka iPad Air nohatsaraina tsy ho ela iPhone News
Tony Cortes | | iPad Air, maro
Ny iPad Air taranaka fahefatra amin'izao fotoana izao dia toa ahy ny takelaka marina kokoa sy voalanjalanja izay ananan'i Apple amin'izao fotoana izao. Raha tsy hoe mila efijery lehibe kokoa ianao ary misafidy iPad Pro, ny iPad Air no sanda voalanjalanja indrindra amin'ny vola, ary miaraka amin'ny endri-javatra rehetra ananan'ny zokiny. Efa handrefy ny antony ilanao iPad Pro miaraka amin'ny M1 ianao, tsy misy macOS...
mifanaraka amin'ny in Apple Pensilihazo 2, ny endrika ivelany sy ny endri-javatra misy azy dia mahatonga azy ho mendrika ny handoa vola bebe kokoa noho ny iPad fototra. Ary raha manapa-kevitra ny hanavao azy i Apple, manavao ny processeur, ny fakantsary ary ny efijery, dia ronono izany, tsy misy isalasalana.
Toa (ary raha ny lojika, azo antoka fa ho izany) fa ny Apple dia mikasa ny hanomboka a iPad Air nohavaozina. Izy io no taranaka fahadimy amin'ny maodely mpanelanelana an'ny Apple iPad, mandrakotra ny iPad sy ny iPad Pro.
Araka ny navoaka Mac Otakara, Apple dia mikasa ny hamoaka fanavaozana ny iPad Air amin'izao fotoana izao, izay hitazona ny endriny ivelany, ary ny fanovana dia ho an'ny azy ihany. singa anatiny.
Ity tatitra ity dia manazava fa ny taranaka fahadimy amin'ny iPad Air dia hametraka processeur A15 Bionic, fakan-tsary eo anoloana faran'izay midadasika 12 megapixels miaraka amin'ny fanohanana ny Centre Stage, Fifandraisana 5G ho an'ny modely LTE sy flash True Tone Quad-LED.
Ho hitantsika ve izany amin'ny volana martsa?
Raha raisina amin'ny fomba mahazatra izany ny hetsika voalohany Ny Apple an'ny taona dia matetika amin'ny volana martsa na farafahatarany amin'ny volana aprily, azo inoana fa i Tim Cook sy ny ekipany dia hanolotra antsika ity taranaka vaovao amin'ny iPad Air amin'izao fotoana izao amin'ny teny fototra.
Raha marina ireo tsaho rehetra ireo (izay mety ho izy ireo, satria navoaka tamin'ny Oktobra 2020 ny iPad Air ankehitriny), ary Apple dia mampiditra ireo fanovana rehetra ireo nefa tsy mampitombo ny vidiny, dia tsy isalasalana fa ho iPad voalanjalanja indrindra amin'ireo modely telo, mety tsara ny karazana mpampiasa rehetra, na dia ny fitakiana indrindra aza. Averiko indray ilay fanontaniana avy amin'ny teny fampidirana hoe: nahoana ianao no mila a iPad Pro miaraka amin'ny processeur M1, raha tsy azonao atao ny manindry azy amin'ny macOS?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » maro » Apple dia mety hamoaka iPad Air nohatsaraina tsy ho ela
Ricardo Adams P. dia hoy izy:
Mieritreritra aho fa ny 11″ Ipad pro dia safidy tsara kokoa ho an'ny USD$200 fanampiny anananao, Chip M1, izay tsy ampy ampiasaina, marina izany, saingy manana hery lehibe kokoa, avo roa heny ny fitahirizana, pro motion screen, tsara kokoa. fakan-tsary, USB type C miaraka amin'ny fanohanan'ny Thunderbolt, feo tsara kokoa, id face ary manao famerenana haingana ny pejy, nisafidy ny 11″ pro aho nahita fa ny fahasamihafan'ny vidiny dia voamarina be.
Valiny an'i Ricardo Adasme P.
Ny kojakoja fiampangana tsara indrindra avy amin'ny ESR sy Syncware ho an'ny iPhone-nao